Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) | မြန်မာ အလှအပ လမျးညှနျ Myanmar Beauty Guide Drecome Beauty
Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) | Hlaing
Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III )
Hair Saloon / Eye Beauty / Beauty Others
Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) ကို အမှတ် ၇၈/၉ ၊ ဦးစလမ်း ၊ ၂ ရပ်ကွက် ၊ လှိုင်မြို့ နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ တွင် သုံးခုမြောက်ဆိုင်ခွဲ အဖြစ် 2017 ခုနှစ်တွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ဆံကေသာ၊ မျက်လုံးအလှအပပြင်ဆင်မှုများနှင့် မျက်နှာပိုင်းဆိုင်ရာ အလှပြင်ဆင်ခြင်းများကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေတာ နှစ်ပေါင်း (၁၈)နှစ်ရှိပါပြီ။ မျက်တောင်ဆက်ခြင်း၊ မျက်ခုံးပုံဖော်ခြင်း အစရှိသည်များကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး USA made brandများနှင့် AQUOS အမှတ်တံဆိပ်အစရှိသော အကောင်းဆုံးပစ္စည်းများသာအသုံးပြုဆောင်ရွက်ပေးပါတယ်။
Hair Saloon | Eye Beauty | Beauty Others
No 78/9, U Sa Street,2Quarter, Hlaing Township, Yangon
အနီးအနား ရွာမကွေ့ မှတ်တိုင်5မိနစ် လမ်းလျှောက်လျှင် ကြာချိန်
Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) Ko Kyi Soe Beauty Salon ( III ) is located at No 78/9, U Sa Street,2Quarter, Hlaing Township, Yangon. Almost all 18 years, this salon offers Hair Beauty, Eyes Beauty, Facial Beauty such as makeup for evening parties and wedding. They only use USA made branded products and AQUOS brand for quality service.